यी महिलाका ५ श्रीमान् ? श्रीमतीसँग सुत्ने पालो हप्तामा १ पटक मात्र आउँछ - IAUA
महाभारत कालमा ५ वटा पतिलाई स्विकारेको कथा तपाई हामीले हेर्दै र देख्दै आएका छौँ । तर २१ औँ शताब्दिमा पनि द्रौपतीको कल्पना गर्न सकिन्छ ? त्यस्तै भएको छ भारत देहरादूनकी राजो वर्माको जिवनमा पनि । उनले ५ वटा पतिसँग रात बिताउँछिन् ।
जहाँसम्मकी उनले आँफुले जन्म दिएकी १८ महिने छोरी कुन श्रीमानको संभोगबाट जन्मिएकी हुन् । यद्यपी उनीहरु सबैजना एक अर्काबिच उत्तिकै प्रेम गर्छन् । गरिब परिवारका यि दाजुभाईको घरमा जम्मा एउटै कोठा छ उनीहरु श्रीमतीसँग दिनमा १ जनामात्रै सँगै सुत्छन् । अरु सबै बाहिर मझेरीमा सुत्छन् । र आ आफ्नो पालो कुरेर श्रीमतीको कोठीमा जान्छन् । जुन कुरा देहरादूनको हिमालय गाउँको परम्परा अनुसार एक जना भाईसँग बिहे गरे उसका सबै भाईलाई श्रीमान् मान्नुपर्ने भएपछि राजमोले सबैलाई श्रीमानका रुपमा अपनाएकी हुन् । जुन विश्वकै अनौठो परम्पराका रुपमा सबैले हेर्दै आएका छन् ।
Previous Previous post: जान्नुहोस् हवाईजहाजभन्दा पनि महंगो यो कुकुरको के छ विशेषता
Next Next post: सेक्सकै कारण ज्यान गुमाएकी महारानीको छुट्टै कथा